Indlu yaseNtabeni "U lesa" kwiiNtaba zeEagle
Výprachtice, Pardubický kraj, Czechia
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJiří
I-cottage esanda kwakhiwa itholakala kwilali iVýprachtice 1 km ukusuka kwindawo ye-ski Čenkovice (iimeko ezifanelekileyo zokuzonwabisa unyaka wonke). Ehlotyeni ukuhambahamba, ukuhamba ngebhayisekile, ebusika ukutyibilika ukusuka kuDisemba ukuya kuMatshi, iindlela zokuhla ngobunzima obomvu noluhlaza okwesibhakabhaka. I-skiing yangokuhlwa yinto eqhelekileyo. Iindlela ezinqumla ilizwe kwindawo yaseBuková hora kunye ne-Suchý vrch zingaphezu kweekhilomitha ezingamashumi amathathu ubude. Kukho kwakhona indawo ye-snowboard. Ngokuthe ngqo kwilali iVýprachtice (i-300 m ukusuka kwindlwana) yindawo yokuthambeka ekhephu kunye nekhephu kunye ne-skiing ebusuku.
Le cottage inamagumbi amabini. Indlu nganye inomnyango wayo wabucala. Indlu yesibini isebenzela umninimzi ngeenjongo zabucala. Umgangatho ophantsi unegumbi lokuhlala elidityaniswe nekhitshi kunye negumbi lokuhlambela elineshawa kunye nendlu yangasese. Phezulu kukho amagumbi okulala amabini aneebhedi ezintlanu- ibhedi e-1 yabantu ababini, i-1 x 3 iibhedi kunye nendlu yangasese enesinki. Ukufudumeza kombane ukufudumeza ngokuthe ngqo ii-radiators, ukufudumeza umgangatho, ukukwazi ukufudumeza kwindawo yomlilo.
Iholo yokungena enodonga olujingayo kunye nebhokisi yezihlangu. Igumbi lokuhlala (i-sofa, i-TV + SAT, itafile, izitulo) eziqhagamshelwe kwi-kitchenette yanamhlanje (ikhitshi ene-hob, i-oven yombane, i-microwave, ifriji, i-kettle, izitya zabantu abayi-6). Kukho indawo yomlilo kwigumbi lokuhlala. Igumbi lokuhlambela (ishawa + yangasese). Kukwakho neeseli ezitshixwayo zokutyibiliza ekhephini okanye iibhayisekile. Iitawuli, amashiti, izinto zangasese kunye neemveliso zokucoca zibonelelwa.
Indawo yokutyela kunye nevenkile malunga ne-2km ukusuka kwindlwana.
Malunga ne-300m ukusuka kwi-cottage i-ski resort i-Ovaz - i-400m ubude be-ski slope ilungele iintsapho ezinabantwana kunye nabaqalayo. Kwi-complex kukho i-kiosk kunye ne-ski rental, kubandakanywa nezixhobo ze-ski. Phantsi kweemeko ezifanelekileyo, kukwakho ithuba lokutyibiliza ekhephini ebusuku.
Umbuki zindwendwe ngu- Jiří